Ukukhula kogqozi ngenxa yocwaningo oluqinisekisa ukuphumelelisa izidingo zamakilayenti.
Cela ukukhonjiswa kuqala (demo)
Zenzele umklamo wakho (survey) kalula ngokuqoqa ulwazi usebenzisa izinsiza ze Isifundo se-Technology Online.
Imicimbi yemiklamo eyehlukene (Surveyfiesta); njengezinkampani ezenza ucwaningo ,ziyizinkundla ezikunikeza ukuqonda ngezinto okumele uzenze ukuze ukwazi ukuqala uqhubekele phambili. Ungakhetha umklamo osukhona vele, bese uwuhlela ngendlela ehambisana nawe. Amaphethini (template) emiklamo yethu ahambisana nezidingo zakho ngokugcwele ukuze ibrand yakho ibe yile nto ofuna ibe yiyo.
Sayina bese uyazama
Qoqa imiphumela kunoma iyiphi insiza (device) yakho
Ukuthumela umklamo(survey) kulabo osebenzisana nabo ungakudlulisa ngezinkundla zemiklamo eyehlukene ( Surveyfiesta) noma ungakhetha ukusebenzisa imeyili (email). Ukunezezela, izinkundla zemiklamo eyehlukene zenza ube nolwazi lokwabelana nabanye umklamo wakho ngezinkundla zokuxhumana.
Hlaziya imibiko yakho ngesikhathi sangempela
Izinkundla zemiklamo yezinkampani ezehlukene zinikeza imibiko ezenzakalelayo mayelana nenqubekela phambili yomklamo wakho kanye nemininingwane eqoqiwe. Imibiko ngemiphumela yemiklamo yethu yenzelwe ukuba ikunike umqondo osheshayo ngemininingwane eqoqiwe, ekunika nomdlandla wokuba nogqozi lokuqala uqhubekele phambili nombiko wocwaningo lwakho. Le mibiko ngokunjalo ingasetshenziselwa ukuhlela (edit) nokwaba ngononina (distribute).
Zama ukuba yilungu lalelisu (Plan) lethu lwamahhala uzwe amazwi ngobhoko ukuthi imigomo ekhona kwizinkundla zemiklamo yezinkampani ezehlukene ihamba kanjani.
Iimigomo Yemikhiqizo Esemqoka
Zijwayeze ngamaphethini emiklamo
Sinikeza ngamaphethini ahambisana nezidingo zakho ukuze ukwazi ukwenza imiklamo egqamisa ibrendi (brand) yakho. Kanye nezinto ezimqoka kuwe.
Hlola Umlando Wemininingwane
Ziphathele wena ngokuthanda amaprojekthi akho ocwaningo aseqediwe. Ungawagcina kwizinkundla zemiklamo yezinkampani ezehlukene noma uwacishe. Unegunya eligcwele lokwenza noma yini ngemininingwane yocwaningo lwakho.
Ukuxhumana Kwezinkundla Zokuxhumana
Inkundla yemiklamo yezinkampani ezehlukene iyahlangana nezinkundla zokuxhumana ezidumile bese umklamo wakho ukwazi ukufinyelela kubantu abaningi.
Sebenzisa uhlobo lwethu lokubika ukuze uthole ngokushesha imibiko yemiphumela yomklamo wakho.
Hlola imibiko eyenzeka njengamanje
Inkundla yemiklamo yezinkampani ezehlukene ikunikeza isimo socwaningo lwakho bese ihlanganisa nemigomo ethunyelwayo ukukukhumbuza ukuze ugqugquzele abanye osebenzisana nabo.
Ucwaningo lwezinzululwazi kanye namaNyuvesi asemthethweni, namaKholiji abhalise ngokusemthethweni, bonke banalo ilungelo lolwazi olungaphezulu olunganothisa ucwaningo lwabo. Loku kuhlanganisa kokunye, umhlahlandlela wezinto eziwumgogodla ezichaza kabanzi ngesisekelo (basics) sezindlela eziningi zokwenza ucwaningo, umhlahlandlela wocwaningo lokwakha imibuzo yomklamo, ukuhlaziya imininingwane yocwaningo nokunye. Lapha ukwazi ukuhlangana nabanye abacwaningi. ukwazi nokwabelana ngama-athikili kanye nokunye okuhambisana nako.
Inkundla YeNkomfa YeziNzululwazi
Phezu kwesaphothi enikezwa abacwaningi beziNzululwazi, sibuye sinikeze izinkundla zeNkomfa yeziNzululwazi ukuze iprosesi yokuhlela umcimbi (event) , ukwengamela iprosesi yokubhaliswa kwabafundi, ukuqoqa nokuhlolwa kocwaningo olufingqiwe (summary) oselukulungele ukusakazwa noma olungakakulungeli. (published \_unpublished ) kanye nokunye okuwumgogodla wocwaningo.
Ngenela uhlelo lwethu oluhlanganisa nabanye kwizinhlelo ezenziwayo ukuze wandise usizo ongalunikeza amakilayenti (clients) akho. Asinikezi nje isaphothi oyidingayo kuphela lapho uhlela izinkundla zemiklamo yezinkampani ezehlukene zamakilayenti akho, kodwa ubuye ujabulele ukuthi amakilayenti akho owabhalise kumklamo wezinkampani ezehlukene, athola loko okubanikeza ugqozi olukhulu mayelana nezomnotho.
Ukusiza izinkulungwane zamabhizinisi kwenza izinqumo ezinobuhlakani.
Guqula ngokuphelele izindlela ezigqugquzela ucwaningo lwemakethe yakho.
Qala umklamo wakho manje